Marc Ravalomanana sy Andry Rajoelina : Nanitsakitsaka ny Foloalindahy -
AccueilRaharaham-pirenenaMarc Ravalomanana sy Andry Rajoelina : Nanitsakitsaka ny Foloalindahy
Milaza ny hanao hetsika iombonana etsy amin’ny lapan’ny tanàna amin’ny sabotsy ho avy izao i Andry Rajoelina sy Marc Ravalomanana ary efa naniraka ireny manamboninahitra misotro ronono ireny hanao fanambarana tetsy amin’ny La Rotonde. Mitodika tanteraka any amin’ny Foloalindahy ny mason’ny vahoaka Malagasy eo anatrehan’izany rehetra izany.
Nampiasa ny Zanadambo ny TIM sy Marc Ravalomanana ny taona 2002, nisambotra sy nampiasa herisetra tamin’ireo manamboninahitra nitàna andraikitra teto tamin’izany fotoana izany. Mialohan’ny zavatra rehetra dia heverina fa tsara aloha ny mamantatra hoe iza moa ireo zanadambo ireo? Olona efa nailiky ny Foloalindahy noho ny antony maro, izany hoe, tsy mendrika ho isan’ny fianakaviamben’ny Tafika sy ny Foloalindahy intsony no novatsiana fitaovam-piadiana hampiasa hery sy hanitsakitsaka ny Tafika sy ny Foloalindahy. Maro ireo namoy ny ainy, an-jatony ireo miaramila sy manamboninahitra nahiditra am-ponja noho ny fifanolanana politika teo amin’ny amiraly Didier Ratsiraka sy Marc Ravalomanana. Nanomboka ny taona 2002 no tena nivaky sy nizarazara ny Foloalindahy ary i Marc Ravalomana no tompon’antoka voalohany tamin’izany.
Niditra an-tsehatra teo amin’izay fanitsakitsahana ny Foloalindahy izay indray i Andry Rajoelina ny taona 2009. Nekena sy nomena vahana nandritra ny fanonganam-panjakana ny faniratsirana manamboninahitra ambony ataona manamboninahitra lefitra sy vata miaramila, tahaka ny zava-nitranga teny amin’ny ministeran’ny Foloalindahy. Namporisihina hifamono ny samy miaramila; nisy ireo namoy ny ainy ary maro ihany koa ireo niditra am-ponja ary baiko avy amin’i Andry Rajoelina avokoa izany rehetra izany.
Tandroka aron’ny vozona
Mitodika tanteraka any amin’ny Foloalindahy sy ny Tafika Malagasy ny mason’ny vahoaka amin’ny maha tandroka aron’ny vozona azy ireo, manoloana izao fikasàn’i Marc Ravalomanana sy Andry Rajoelina amin’ny sabotsy izao. Aim-bahoaka aman-jatony no latsaka teto Madagasikara ny taona 2002-2009, nitondra takaitra vokatry ny fitiavam-pahefanan’izany Marc Ravalomanana sy Andry Rajoelina izany ny Foloalindahy, fananam-bahoaka maro no rava teto ary tsy nitsahatra nitontongana ny fiainam-bahoaka noho ireo krizy nifandimby. Izao indray anefa, ireo manamboninahitra efa misotro ronono tompon’antoka feno tamin’ireo zavatra nambara tetsy ambony no lasa mpanome lesona ny Foloalindahy, ireo izay nanitsakitsaka ny hasin’izany Tafika Malagasy izany indray no hiara-dia etsy amin’ny lapan’ny tanàna. Ho an’ny Tanindrazana tokoa ve?
Isan’ireo toerana notsidihin’ny « Princesse Royale » Anne Elisabeth Alice Louise sy ny vadiny ny « cimetière de guerre Britannique » ao Antsiranana. Omaly no nitodi-doha tany an-toerana izy ireo. Tafiditra indrindra amin’ny fanombohana ny fankalazana ny ...Tohiny